समृद्धिको थालनी कहाँबाट गर्ने ?
५६९ पटक पढिएको
नेपाली जनतालाई अहिले देखाइएको समृद्धिको सपनाको शुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने अहिलेको पहिलो प्रश्न हो ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई समृद्धिको सपना देखाइदिए । त्यो समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ ? त्यसका लागि अब नेपाली जनताले केके गर्नुपर्छ ? त्यसको एउटा पाटो त प्रधानमन्त्रीले देखाएका छन् भन्न सकिने भयो । नेपाली भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्नलाई २ छिमेकी देशको समुद्री बाटो रेलको लिगले जोड्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यो जोडिएपछि देशले आफ्नो देशको उत्पादनलाई अझ धेरै मुलुकसँग जोड्नेछ । नेपालको पहँुच ती मुलुकसम्म पुग्न सक्छ । भरखर मात्रै चीनले नेपाललाई ५ वटा बन्दरगाह खुला गरेको छ । ती खुला गरिएका बन्दरगाहबाट हामी संसारका सबै मुलुकमा व्यापार गर्न सक्ने भयौं ।
त्यस्तै, बिमस्टेक सम्मेलनले बङ्गालको खाडीको उपयोगितासमेत नेपालको अर्को अवसर हो । यो सबै खालको अवसरलाई उपयोग गर्दै अब नेपालकै नदीमा पानीजहाज ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यी लक्ष्यलाई पूरा गर्न केके गर्नुपर्छ ? देश विकासका लागि अहिले सरकारले देखाएको बाटोमा हिँड्ने काम अब नेपाली जनताले गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले ३ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूँजीः नेपाली जनतासँग भएको पूँजीलाई सङ्गठित गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । नेपालले विद्युत उत्पदान गरेमा सो विद्युत नै सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्न सकिन्छ । हालैको बिमस्टेक सम्मेलनले बिमस्टेकका सदस्य मुलुकमा ऊर्जा आयात र निर्यात गर्ने सहमति गरेको छ । त्यसो भएपछि हामीले जति विद्युत उत्पादन गरे पनि बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यो एउटा पाटो भयो ।
अर्को पाटो भनेको नेपालमा साना कुटीर उद्योगधन्दाका लागि बिजुलीको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने हो भने मात्र पनि साना कुटीर उद्योग खोली रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
अहिले संसारलाई प्रदुषणले छपक्कै ढाकेको छ । त्यसलाई कम गर्नलाई अबका दिनमा देशमा सम्पूर्ण यातायातका साधनलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । घरायसी कामका लागि पनि विद्युत नै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले अगाडि सारेका सङ्घीय सरकारका राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई पूरा गर्नुपर्छ । जो ठूला खालका योजना हुनेछन् ।
त्यस्तै, मध्यम खालका योजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । अब स्थानीय सरकारका विकासे योजना सम्पूर्ण रूपले जनसहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि गर्भमै तुहिने सम्भावना हुन्छ । अहिलेसम्म संसारका विकसित मुलुकलाई हेर्दा सबैले जनताको सहभागितालाई जोड दिएका छन् ।
समृद्धिको थालनी गर्ने भनेको जनताबाट हो । जनसहभागिता जुटाउने काम स्थानीय सरकारले गर्छ र गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । त्यसपछि त्यसको कार्ययोजना अनि त्यसलाई परिचालन गर्ने सक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।
यो भयो राज्यले गर्ने काम । राज्यले मात्रै यी सबै काम गर्न सक्छ ? त्यो पक्कै सक्दैन । यसमा जनसहभागिता अनिवार्य छ भनेर भनिसकियो । त्यसमा अरु पक्षको सहभागिता पनि अनिवार्य छ । देशको विकासमा निजीकरणलाई राज्यले सहभागी गराउन समेत स्पष्ट नीति नियम बनाउनुपर्छ ।
पर्यटनः हाम्रो देशमा पर्यटन विकास गर्ने र यसलाई व्यवस्थित मात्रै गर्न सकियो भने पनि मुलुकको कायापलट गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्र भनेको हाम्रो मुलुकमा फराकिलो छ । हामीसँग मेचीदेखि महाकालीसम्मको हिमाली शृङ्खला, त्यसको काखमा रहेको जडीबुटी र चौंरी अनि कस्तुरीका साथै हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिमचितुवाका साथै सुन्दर वनस्पति छन् ।
नेपालमा प्रत्येक एक किलोमिटरमा एउटा सुन्दर पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालको सबैभन्दा ठूलो पर्यटकीय क्षेत्र भनेको धार्मिक क्षेत्र पनि हो । यसमा हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्नलाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा बौद्ध धर्मावलम्बीको लागि लुम्बिनीमा व्यापक रूपले पूर्वाधारको विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यहाँ एक रातमा दशौँ हजार मानिस बस्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, पशुपतिनाथमा अहिले लगाइएको गैर हिन्दूको प्रवेशलाई खुला गर्नुपर्छ । बरु प्रवेश शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यस्तै मुक्तिनाथ, मनकामना, इच्छाकामना जस्ता ठाउँलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने हामी एक वर्षमा नेपालमा ५० लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ ।
म इटालीको राजधानी रोम गएको थिएँ । त्यहाँबाट नजिकै भ्याटिकन सिटी रहेछ । त्यो क्रिस्चियनहरूको सबैभन्दा पहिलो चर्च रहेछ । त्यहाँ पोपको बस्ने ठाउँ पनि रहेछ । त्यो चर्चमा प्रवेश गर्न पैसा तिर्नुपर्दो रहेछ । पैसा तिरेपछि यो धर्म, त्यो धर्म भनिँदो रहेनछ । सबैले प्रवेश पाउने रहेछन् । त्यहाँ दिनमा २० औँ हजार मानिस आउँछन् भन्थे । त्यसैले त्यो भ्याटिकन सिटी चल्दो रहेछ । त्यस्तै, हामीले अब पशुपतिनाथमा पनि पैसा तिरेर सबै पर्यटकलाई प्रवेश दिनुपर्छ ।
कृषिः हाम्रो देशको अधिकांश माटो कृषियोग्य छ । तर त्यो जमिन अहिले बाँझो छ । हाम्रो देशमा अहिले २ करोड हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो छ । आफ्नो घर वरिपरिको जमिन बाँझो राखेर हामी बजारमा गएर विषादीयुक्त तरकारी किनेर ल्याएर विष खान्छौँ । अनि हामी यति धेरै जमिन बाँझो छाडेर अर्काको देशमा सुख खोज्न जान्छौँ र त्यहाँ पनि खेतबारीमै काम गछौँ । त्यहाँ यहाँको भन्दा चार गुना बढी मिहिनेत गरेर १५ घण्टासम्म काम गर्छौँ ।
४०–४५ डिग्री तापक्रममा काम गरेर कमाएको पैसा पनि हामी सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ । विदेश गएर कमाइ गरेको पैसा पनि सकिन्छ । बाबुबाजेले जोडिदिएको घरखेत पनि सकिन्छ ।
अब हामीले यो हाम्रो बाँझो रहेको जमिनलाई सदुपयोग गर्ने हो भने मात्रै दुई वर्षमा हामी अहिले आयात गरेको खाद्यान्नलाई निर्यातमा परिणत गर्न सक्छौँ । हामीले आफूबाट शुरु गर्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्दा मैले इजरायलका बारेमा धेरै सुनेको छु । त्यहाँ गएर आउने र त्यहाँ लामो समय कृषि क्षेत्रमै काम गरेका नेपालीका अनुसार इजरायल पहिले मरुभूमि थियो । तर अहिले त्यहाँ अरुतिरबाट माटो बोकेर ल्याएर समुद्रको नुनिलो पानीलाई छानेर प्रयोग गरी संसारको सबैभन्दा नमुना खेती लगाइएको छ । त्यहाँको खाद्यान्न र फलफूल संसारका धेरै मुलुकमा निर्यात हुन्छ ।
हाम्रोमा माटैमाटो छ र पानी पनि प्रशस्त छ । तर पनि हामी हात बाँधेर बसिरहेका छौं । अनि हामी आफ्नो जमिन बाँझो राखेर विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाले किनेर खान्छौँ । हामीले हाम्रो विकास, हाम्रो समृद्धिको कुरा गर्दा आफूले जानेका छैनौँ र सिक्ने प्रयत्न गरेका छौँ कि छैनौं ? यो प्रश्न हो ?
पहिलो प्रश्न हो, यो देशको सरकारलाई । दोस्रो, हामी नागरिकलाई ।
सरकारकै कुरा गर्दा पनि सरकारलाई अहिलेसम्म गफ गर्दै ठीक भएको छ । मुलुकको समृद्धिको थालनी कहाँबाट गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । अनि समृद्धि भनेर गफ मात्रै गरेर हुन्छ ? अर्कोतिर जनता आफ्नो घर अगाडि अरुले विकास ल्याएर थुपारिदिनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । अनि पकाइसकेपछि खुवाइ दिनुपर्ने जस्तो ठान्छन्।
दिनभरि चियापसलमा बसेर गफ चुट्यो । मानिसका कुरा गरेर मानिसलाई उडायो । आफूले केही नगर्ने अनि काम गर्नेलाई पनि खुब काम गरेको भनेर खिल्ली उडाउने परिपाटी छ । आफू काम नगर्ने तर, अर्काले उब्जाएको तरकारी ङिच्च दाँत देखाएर एक छाक खाऊँ न भनी माग्छौं ।
हामी यस्तै भयौँ । अरु मुलुकले कसरी आफ्नो देशलाई अब्बल बनाएर उभ्याएका छन् त्यो पनि हेरौँ । हामीले उनीहरूको विकासबाट सिक्दै आफ्नै सिर्जनात्मकता लागू गरौँ ।
विकासबारे म जापानीहरूको कुरा राख्न चाहन्छु । म एक पटक जापान गएको थिएँ । त्यहाँ गएर हेर्दा उनीहरूले गरेको विकास देख्दा हामीले कथामा सुनेको स्वर्ग त्यहाँ रहेछ भन्ने लाग्यो । मलाई त सपनाजस्तै लाग्यो । जता हेर्याे उस्तै सुन्दर छ । सडकमा सुत्दा पनि हुनेजस्तै सफा छ । उभिइरहेको लिफ्टमा मानिस पुगेपछि सरर कुद्न थाल्छ । नचलेको एसी मानिस अगाडि गएपछि आफैँ चल्छ । बन्द धारामा हात थापेपछि पानी आउँछ । एउटा फूलकोपी ५ केजी तौलको छ । मूला हेर्दा एउटा खाँबोजस्तो लाग्छ । प्रत्येक सडक किनारमा १ सय ५० देखि २ सय मिटर बीचमा एउटा खाना राखेको मेसिन छ । त्यसलाई भ्याडिङ मेसिन भनिन्छ । मानिसलाई के खान मन लाग्यो । पैसा खसायो खानेकुरा तल खस्छ । त्यहीँ बसेर खायो । फोहोर त्यहीँ नजिकैको कन्टेनरमा राखिदियो । बेलुका सफा गर्छ । त्यहीँ मेट्रो रेलको जाल छ, बस छ ।
७० वर्षका मानिस २२ वर्षे तन्नेरीजस्तै काम गर्छन् । त्यो देखेपछि मैले हाम्रो दोभाषे दिदीलाई सोधेको थिएँ । तपाईंहरूले यति छिटै यो देशलाई कसरी यस्तो बनाउनुभयो । उनले मलाई भनेकी थिइन् । ‘हामी दुई कुरामा सङ्कल्परत थियौँ । पहिलो अमेरिकाले हामीलाई यति साह्रो दुःखी बनायो । हाम्रा हिरोसिमा र नागासाकीमा खसाएको बमका कारण हाम्रा धेरै सन्तान हामीले गुमायाँै । धेरै जना अपाङ्ग छन् । त्यो एकदिन मैले ठूलो अपराध गरेँछु भन्ने महसुस गराउनु थियो । हामीले गरेको विकासले उसलाई हाम्रो खाँचो परोस् । त्यो गराउनु थियो ।
दोस्रो थियो अब संसारकै समृद्ध मुलुक र समृद्ध जनता हामी आफू र हाम्रै देश बन्नुपर्छ भनेर संसारमा सबैभन्दा लामो आयु भएका जनता कहाँ छन् भन्दा जापानको नाम आउनुपर्छ भन्ने थियो । यो विश्वासका साथ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो । सरकारले जनतालाई आह्वान ग¥यो । टेक्नोलोजी दियो । हामीेले कम्तीमा १८ घण्टा सम्म काम गयौँ । अहिले पनि हामी थोरैमा १२ घण्टा धेरैमा १८ घण्टासम्म काम गर्छौँ । हाम्रो कडा मिहिनेतले हाम्रो देशलाई जापान बनायो । हामी पनि संसार सामु जापानी भन्दै हामीलाई अहिले जापानी भएकोमा गर्व छ ।’
संसारका सबै विकसित मुलुक त्यसै समृद्ध भएका होइनन् । सरकारले राम्रो नीति बनाइदिएको छ । जनतालाई त्यसमा सहभागी गराएको छ । जनता पनि राज्यको आह्वानलाई स्वीकार गरी काम गरेका छन् र नै समृद्ध बनेका छन् । त्यसैले अब हाम्रो देशका ३ वटै सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसै अनुसारको नीति पनि बनाउनुपर्छ । सरकारले जनतालाई काममा लगाउनुपर्छ । जनताले सरकारको मुख ताकेर हँुदैन । सरकारको काम नीति बनाउने हो । त्यसै अनुसारको टेक्नोलोजी दिने हो । विज्ञहरूको व्यवस्था गरिदिने हो ।
देशका ३ वटै सरकारले जनसहभागिता गराउन श्रममा सहभागिता गराउनुपर्छ । श्रममा विज्ञलाई ठाउँको विशेषताका आधारमा योजना बनाउन आर्थिक लगानी गर्न सक्नेलाई आर्थिक लगानीको क्षेत्रमा सहभागिता गराउनुपर्छ ।
आम नागरिकलाई मुलुकप्रति जिम्मेवार बनाउने काम राज्यको हो । राज्यले विकासका लागि गरेको आह्वानलाई नागरिकले दैनिक १२ घण्टा लागेर देश बनाउने सङ्कल्प गरे मात्रै मुलुक बनाउन सकिन्छ ।
जसरी बारी जोत्न दुई वटा गोरु चाहिन्छ, ताली बजाउन २ वटा हात चाहिन्छ । त्यसरी नै अब सरकार र नागरिक मिलेर देशमा समृद्धिको थालनी गरौँ । छिमेकी मुलुकले हामीलाई छाडेर अगाडि पुगेका छन् । उनीहरूलाई भेट्न जापानीहरूले गरेजस्तै गरी हामीले पनि काम गरौं ।